ကိုယ့် Facebook Account တကယ် Hack ခံရတာလား? ( SE ထိုးပြီးဂျင်းလာထည့်တာလား ) သိဖို့(Video) | Online Service Center Myanmar -->
ကိုယ့် Facebook Account တကယ် Hack ခံရတာလား? ( SE ထိုးပြီးဂျင်းလာထည့်တာလား ) သိဖို့(Video)
ကိုယ့် Facebook Account တကယ် Hack ခံရတာလား? ( SE ထိုးပြီးဂျင်းလာထည့်တာလား ) သိဖို့
ကိုယ့်ကို Screenshot လေးလာပြပြီး မင်း Account တော့ Hack ထားပြီးပြီ ဒီမှာတွေ့လား လက်ရှိ Password မချိန်းသေးဘူး။ မင်းအနေနဲ့ဆက်သုံးချင်ရင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေး အဲ့ဒါဆို မင်းအကောင့်ကိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ ပိုက်ဆံမပေးဘူးဆိုရင် အကောင့်ကိုဖျက်ချလိုက်မယ်တို့၊ Password ချိန်းပြီးယူလိုက်မယ်တို့ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေညှစ်လာခဲ့ရင် ဂျင်းမမိကြစေဖို့ Sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
SE ထိုးခံရပြီး အလိမ်အညာခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
#Facebook #Hack #SE